Orinasa milahatra PTFE - Mpanamboatra milahatra PTFE any Sina
PTFE Nilahatra Fittings / Sodina
PTFE nilahatra fantsona sy ny fittings dia mahatohitra ny harafesina, feno banga sy ny tsindry ambony mandritra ny fanaraha-maso ny tsiranoka. Ny fantson-tsipika sy fittings nalahatra dia matetika ampiasaina amin'ny fikirakirana tsiranoka tena manimba amin'ny maripana ambony. Ny pipa sy ny fittings dia nilahatra tamin'ny PTFE tamin'ny fampiasana ny dingana mifanaraka indrindra amin'ny endrika sy ny refin'ny vokatra. .
1/2 Inch PTFE mifangaro tubing / Black Black
Ity fantsona PTFE ity dia manome fahombiazana ambony indrindra amin'ny resaka fitantanana tariby amin'ny tontolo masiaka. Ny hafanana avo, ny abrasion, ny hamandoana ary ny akora simika dia tsy mitovy. Safidio ny fenitra ho an'ny hazakazaka mahitsy sy ny hafainganam-pandeha bebe kokoa ho an'ny fitaterana sarotra kokoa. Ity fantsona ity dia toa tsara indrindra eo ambanin'ny saron'ny fiaranao avo lenta, fa ny tady taribinao dia ho tianao amin'ny toerana rehetra. Tanjon'ny hery Dielectric Value 14V isaky ny mil Temperature -454 ° hatramin'ny 500 ° F [-270 ° hatramin'ny 260 ° C] Ferana Oxyg ...
PTFE Polymer Wire ho an'ny fampiasana mari-pana avo lenta amin'ny fananana malefaka tsara. Ho an'ny fampiasana izay ilaina ny fanoherana ny abrasion. Fampiharana: fiaramanidina, varotra, hazakazaka.